Izibonelelo ze nutmeg | Amadoda aQinisekileyo
Izibonelelo ze nutmeg
UFausto Ramirez | | Ukunyamekela, ZeMpilo
Enye yeepropathi ze nutmeg Okona kwaziwayo kukukhuthaza inkumbulo kunye noxinzelelo. Ewe inezinto zendalo ezinceda ekuvuseleleni i- iinkqubo ukuqonda. Ukudityaniswa kukutya, kunokukhuthaza imisebenzi yemihla ngemihla efuna inqanaba elithile loxinzelelo.
Lo iziqholo yaziwa ngezibonelelo zayo kwiphecana lesisu, iququzelela ukwetyisa, kuthoba urhudo, irhasi kunye nokugabha, kunye nokuphelisa iintlungu zesisu. Ukongeza isiqingatha setispuni se-nutmeg powder kwi-chamomile okanye kwi-mint infusions kunceda ukukhulula iintlungu zesisu ezibangelwa kukungalungisi kakuhle.
I-Nutmeg ibalaseleyo ngenye indlela endalo ukuphucula ukujikeleza kwegazi. Ikhusela intliziyo kwaye inciphise umngcipheko wokuvela kweengxaki ezinje Imithambo yegazi. Ngenxa yesi sizathu, le spice isetyenziselwa ukunyanga iintlungu zokuya exesheni kunye neengxaki.
El nutmeg oyile Isetyenziselwa ukunciphisa iintlungu, ukudumba kunye buhlungu izihlunu kunye nokudibanisa, kubandakanywa nezo zibangelwa yi-arthritis, i-gout okanye i-cramp. Ukuba le meko iyabandezeleka, ukuphululwa ngale oli kuyanceda ekuphumleni nasekuthomalaliseni indawo echaphazelekayo.
La i-walnut butternut Kwakhona isithako esihle kakhulu sokuzolisa iimbilini kunye nokunciphisa uxhalaba kuba kukhuthaza ukulala kwaye kukunceda ulale kakuhle. Ngenxa yezi iipropati antibacterial, le spice isetyenziselwa ukunyanga iingxaki ezinje ngomlomo onukayo. Ilwa iintsholongwane ezenza emlonyeni, ezijongene nale ngxaki rhoqo.
Ngaphandle kwazo zonke iipropathi ze i-walnut butternutKubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukusela kakhulu, kunokuba yingozi, kuba ibangela ukuba nemibono kwaye kungonakalisa isibindi kwixesha elide
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » ZeMpilo » Izibonelelo ze nutmeg
Manuel Garcia sitsho
Lonke ulwazi lubaluleke kakhulu kwezempilo
Phendula Manuel Garcia
Isisombululo sokwandisa ubunzima bemisipha ngenyanga
IiTattoos ezincinci, ngawaphi amalungu omzimba angcono?